ဆင်ဆာငြိပီး Music Video ရိုတ်ကူးခွင့် ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဆိုတော် ဟဲလေး သတင်းနှင့် ဗွီဒီယို – Tameelay
မလှောင်ပါနဲ့ သားရယ်# ဘွားးတို့ကို မလှောင်ကြပါနဲ့ သားတို့ရယ်…
ဘွားးတို့ကို မလှောင်ကြပါနဲ့ သားတို့ရယ်… #မလှောင်ပါနဲ့ သားရယ်# ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်တယ်….. သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့…။ ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ်ကမသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကို …
အေးအေးမနေချင်တော့ ထောင်ကျပြီး လက်ထက်ပွဲကိုလည်း နောက်ဆုတ်ထား
အေးအေးမနေချင်တော့ဒုက္ခရောက်ရတယ် မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်ဟာ Singapore Polytechnic တွင် maritime course ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက် ပညာသင်ယူနေသော အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူတွင် student pass ဖြင့်နေထိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုတော့….. တစ်အိမ်ထဲ အတူနေ မြန်မာမိန်းမပျိုလေးများ ရေချိုး၊ ခြေဆေးပြုလုပ်နေသည်ကို spy …
ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး ပို့စ် ” မင်းကို ပြောရတာ ကျွဲပါးစောင်းတီးရသလိုပဲ ”
ယနေ. အကြိုက်ဆုံးပိုစ့် အရှင်ဘုရား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောတာ နားထောင်သေးတယ်ဆို ? အင်း ခဏနားထောင်သေးတယ်။ ဘာတွေပြောသွားတာလဲဘုရား ? Englishလိုပြောသွားတော့ ဘာပြောသွားမှန်း မသိဘူး။ အရှင်ဘုရား နားမလည်ပဲနဲ့များ နားထောင်နေသေးတယ် ဘာလုပ်မှာလဲ ? ဟ ဒကာရဲ့ အားပေးတဲ့အနေနဲ့ နားထောင်တာ ငါနားမလည်လဲ ကိစ္စမရှိဘူး …